Netizen Report: manome voninahitra ireo mpanao gazety nisy namono ny mpiara-miasa aminy ao Afghanistan sy Pakistan nandritra ny Andron’ny fahalalahan-gazety manerantany · Global Voices teny Malagasy
Netizen Report: manome voninahitra ireo mpanao gazety nisy namono ny mpiara-miasa aminy ao Afghanistan sy Pakistan nandritra ny Andron'ny fahalalahan-gazety manerantany
Voadika ny 04 Mey 2018 9:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, ਪੰਜਾਬੀ, বাংলা, English
Sary efa azon'ny rehetra ampiasaina, tsy misy filazana izay tompony.
Ny Tatitra Advox Netizen dia manolotra sary indray mipika iraisampirenena amin'ireo fanamby sy fandresena ary ireo fironana misongadina amin'ny zo an'aterineto manerana izao tontolo izao. Manokana ity lahatsoratra ity ho an'ireo mpanao gazety norahonana na novonoina tamin'ity taona ity izahay, ho fanomezam-boninahitra ny Andron'ny Fahalalahan-Gazety Manerantany tamin'ny 3 mey 2018.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy monja dia efa voaporofo sahady fa taona sarotra ho an'ny mpanao gazety manerantany ny taona 2018. Andro vitsivitsy monja mialoha ny Andron'ny Fahalalahan-gazety manerantany dia efa mpiasan'ny fampitam-baovao folo no maty tao Afghanistan, maty nandritra ny fanaovana vivery ny ainy tao Kabul ny sivy tamin'ireo.
Mpanangom-baovao sy mpaka sary avy amin'ny BBC, AFP, Radio Free Europe ary ireo seha-baovao ao an-toerana ahitana ny Tolo News, 1TV, ary Mashal TV no maty tamin'ny fipoahana. Seha-baovao maro no nitatitra fa nifangaroharo tamin'ireo mpanao gazety ihany koa ilay nanapoaka baomba ny tenany, milaza ny tenany ho mpanangom-baovao.
Nizara saripikan'ny peratra vodiondry nihosondràn'ilay mpaka sary Yar Mohammad, izay hisora-panambadiana amin'ny volana ho avy io, saingy anisan'ny lavo tamin'io fotoana io i Tahir Qadir, mpanao gazety afghan ho fanomezam-boninahitra ireo mitovy asa aminy nanao ny fanangonam-baovao tamin'ny fifandonana tao Kabul.
Fa tsy nahatana ny fampanantenany ny peratra. Ity ny peratra vodiondrin'i Yar Mohammad, mpakasarin'ny Tolo News, izay nampanantena tamin'ny fofombadiny fa hovadiany amin'ny volana hoavy. Anisan'ireo maty androany izy.
Ao Pakistan, mihoatra ny 80 ny mpiasan'ny fampitam-baovao sy mpanandrateny ho fiarovana ny zo nanasonia faanambaràna iray tamin'ny 19 Avrily maneho ny ahiahiny lalina amin'ny fihasimbàn'ny fahalalahan-gazety ao amin'ny firenena. Notononin-dry zareo ny fandrarana vao haingana nahazo ny tambajotram-baovao Geo, mampitombo ny fanivanana ny vaovao an-tserasera, sy ny fandrahonana atrehin'ny mpanao gazety, indrindra ireo manangom-baovao ny “hetsika mpandala ny zo.”
“Misy ny fitomboan'ny fanivanan-tena ary mihabetsaka ihany koa ny fifanakalozan-kevitra amin'ny ‘vaovao nomena’ fa tsy vaovao tena izy, izay manitsakitsaka ny zon'ny olompirenena hahazo vaovao,” hoy ny fivakin'ny fanambaràna.
Milaza ireo mpanandratenin'ny zon'ny mpampita vaovao fa nihananjaka ny fanivanana malefaka ataon'ny seha-baovao indrindra fa eo amin'ny resaka fifanenjanana ara-politika. Nanaisotra tantara momba ny hetsiky ny zon'ny Pashtun ao amin'ny faritra tantanin'ny fiarahan'ny foko ao Pakistan ny seha-baovao maro, mety ho avy amin'ny faneren'ny mpanao sivana avy amin'ny governemanta no nahatonga izany.
Tamin'ny 3 mey nifanatrika tamin'ny polisy, izay nanakana azy ireo tsy handeha ho any amin'ny lapan'ny parlemanta, ireo mpanao gazety nifamory tao Islamabad ho fanomezam-boninahitra ny Andron'ny Fahalalahan-Gazety. Raha nifandona tamin'ny manampahefana ny sasany dia nipetraka tanaty fanoherana mangina kosa ny hafa.
Mpanao gazety Filipino mpanentana radio voatifitra sy maty taorian'ny nanaovany fandaharana
Tao an-tanànan'i Dumaguete tao Filipina, nisy lehilahy iray nitifitra imbetsaka an'ilay mpanangom-baovao amin'ny radio antsoina hoe Edmund Sestoso raha an-dalana hody nahavita ny fandaharany maraina izy tamin'ny 30 avrily. Raha nisy mpitondra tuk-tuk iray niezaka ny hitondra azy tany amin'ny hopitaly, dia notifirin'ilay lehilahy nitondra basy ny kodiaran'ny tuk-tuk. Maty noho ny ratra tamin'ny tifitra nahazo azy i Sestoso tamin'ny 2 Mey. Nilaza tamin'ny fampitam-baovao tao an-toerana ny vadiny fa efa nahazo fandrahonana mifandraika amin'ny fandaharana ataony amin'ny radio i Sestoso talohan'ny namonoana azy.
Mbola tsy voavaly ny antony namonoana ilay Slaovaky mpanao gazety
Nandritra ny fihaonana nifanaovana tamin'ny praiminisitra Slaovaky Peter Pellegrini, ny mpitahiry ny fitombokasem-panjakana Angela Merkel no nandrisika ny mpitarika vao voafidy hamaha ny famonoana tamin'ny marsa 2018 ilay mpanao gazety Jan Kuciak, izay maty niaraka tamin'ny fofombadiny Martina Kusnirova tamin'ny febroary.
Miahiahy ny polisy sy ny olona akaiky an'i Kuciak fa mifandraika amin'ny asany no nahafaty azy. Ny fanadihadiana farany nataony izay tokony havoaka, dia nijery ny fifandraisan'ny tombontsoan'ny governemanta slaovaky sy ny mafia italiana any Slaovakia atsinanana ary nanadihady koa raha mikendry ny hamotika Vondrona Eoropeana ry zareo.
Andro maromaro taorian'ny famonoana, nosamborina ary avy eo navotsotry ny polisy slaovaky ny olompirenena italiana Antonino Vadala, Bruno Vadala, ary Pietro Catroppa, izay nolazaina fa manana fifandraisana avokoa amin'ny andian-jiolahy italiana antsoina hoe ‘Ndrangheta, izay nohadihadian'i Kuciak indrindra mialoha ny fahafatesana. Tsy nisy intsony ny fisamborana tamin'ny famotorana ny raharaham-pamonoana.
Manaiky ny fisian'ny fijoroana vavolombelona ho fiarovana ireo mpanao gazetin'ny Reuters migadra ny mpitsara ao Myanmar
Tamin'ny 2 mey, nanaiky hihaino ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny polisy manampahefana iray nilaza fa tetika nomanin'ny polisy “hamandrihana” ny mpanao gazety ny mpitsara misahana ny raharaha iampangana ireo mpanao gazetin'ny Reuters antsoina hoe Wa Lone sy Kyaw Soe Oo ao Myanmar. Nosamborina ireo mpanao gazety taoriana kely monja tamin'ny fanadihadian-dry zareo ny fisian'ny fasana itambarambe ao amin'ny fanjakana Rakhine, itoeran'ny maro amin'ireo miozolomana Rohingya ao amin'ny firenena. Nampangaina araka ny lalàna misahana ny tsiambaratelom-panjakana ao Myanmar i Wa Lone sy i Kyaw Soe Oo ary mety homelohina hatramin'ny 14 taona am-ponja raha meloka.
Mpanao gazetin'ny Cumhuriyet voaheloka ho ‘manampy fikambanana mpampihorohoro’
Nomelohin'ny fitsarana ao Istanbul ho ‘nanampy fikambanana mpampihorohoro’ ny mpanao gazety sy ireo mpiasa ambony hafa ao amin'ny gazety tiorka mahaleotena mivoaka isan'andro sy ny tranonkalan'ny Cumhuriyet, ao amin'ny raharaha nentin'ny mpampanoa lalàna milaza ny mpiasan'ny gazety ho nanaraka na nanampy ilay mpitondra fivavahana tiorka any an-tsesitany Fetullah Gulen sy ny PKK antokon'ny mpiasa ao Kiordistan. Ankehitriny ireo mpiasan'ny fampitambaovao miisa 14 dia miatrika fanagadrana anelanelan'ny roa ka hatramin'ny fito taona an-tranomaizina.
CPJ: Mpanao gazety 18 no maty nisy namono noho ny asany tamin'ity taona ity
Mitazona fitoeran-dahatahiry ahitana ny famonoana, ny anton'ny famonoana ary ireo antsipirian-javatra niteraka ny fahafatesan'ny mpanao gazety ny vondrona mpandala ny fahalalahan'ny fampitam-baovao ny Committee to Protect Journalists. Hatramin'izao fotoana izao tamin'ity taona 2018 ity, dia nahamarika trangam-pamonoana 18 izay azon-dry zareo hohamafisina ny antony ny antony. Tafiditra amin'izany maty izany:
Brezila: Jefferson Pureza Lopes
Meksika: Leobardo Vázquez Atzin, Leslie Ann Pamela Montenegro del Real
Slaovakia: Ján Kuciak
Maneho ny fiaraha-miory lalina amin'ireo mpanao gazety miatrika fandrahonana, amin'ireo fianakavian'ny mpanao gazety maty novonoina noho ny asany ny Global Voices. Mijoro izahay ho firaisankina amin'ny mpiasan'ny fampitam-baovao rehetra mitady ny fiarovana ny fahalalaham-pitenanana an-tserasera sy andavanandro.
Mamandriha Netizen Report
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Ellery Roberts Biddle, Rohith Jyothish, Rezwan Islam, Chris Rickleton, Ivan Sigal, Filip Stojanovski ary i Sarah Myers West.